Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta oo qeyb mug leh ka qaadanaysa wacyigelinta kahortagga Covid-19 - Jowhar Somali news Leader
Home News Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta oo qeyb mug leh ka qaadanaysa wacyigelinta...
Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta oo qeyb mug leh ka qaadanaysa wacyigelinta kahortagga Covid-19
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Awqaafta & Arr Diinta Osman Adam Dhuubow iyo saraakiil ka tirsan wasaarada ayaa maanta kormeeray 17 dagmo ee gobolka Banaadir iyagoo halkaa ka sameeyay wacyigelin ku saabsan cudurka Coronavirus.
Osman Adam Dhuubow Wasiir ku xigeenka Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ayaa degmooyinka uu booqday kula kulmayay dadweynaha xaafadaha gudahooda, wadooyinka iyo weliba masaajidyada iyadoo shaqaalaha wasaarada ay goobahaas ka wadeen wacyigelin la xiriirta cudurka Coronavirus.
Waxaa uu wasiir ku xigeenka booqasho dhiirigelin u sameeyay howlwadeenada wasaaradda oo aan marna fasax ka galin shaqada wacyigelinta waxana kormeerkiisa ku tagay goobaha mashquulka ah oo ay shaqalaaha Wasaaradda ka wadaan dadaalka wacyigelin & qaybinta afxirka Face Mask ayaa ugu dambayn warbaahinta kula hadlay waaxda wajeer ee Dagmada Kaaraan.
“Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta waxa ay qeyb mug leh ku leedahay wacyigelinta kahortagga cudurka Covid-19 waxayna shaqaalaha wasaarada u taagan yihiin inay kala qeybgalaan bulshada dadaalada loogu jiro ka hortagga cudurkan.”ayuu yiri wasiir ku xigeenka.
Wasaaradda ayaa waxaa ay bilowday dadaalo wacyigelin oo looga hortagayo caabuqa Covid19 tan bishii maarso ee sanadkan.
booqashada wasiir ku xigeenka diinte iyo awqaafta